Sabaaf Qabsaawuu fi Maqaaf Qabsaawuun Wal Hin Miilan. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSabaaf Qabsaawuu fi Maqaaf Qabsaawuun Wal Hin Miilan.
Qixxeessaa Lammii | Muddee 31, 2017
Goototni sabaaf qabsaawan saba isaanitti maqaa horuuf malee ofitti maqaa horuuf hin qabsaawan. Osoo arganii fi dhagahan ibidda diinaatti kan deeman lubbuu ofii jibbanii osoo hin taane kabajaa saba isaaniif argaamsiisuuf lubbuu jijjiirraa hin qabne saba isaaniif gumaachan. Ofii dabranii saba isaaniif dabarsuuf malee jiruu irratti bu’aa gara biraa argachuu barbaadchaaf miti. Seenaa jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti namni du’a booda bu’aa addaa gonfachuuf qabsaawe ykn qabsaawu hin jiru. Kan bu’aa addaa argatu sabicha qabsaawameef ykn wareegamni lubbuu gumaachameef qofa akka ta’e beekkamaadha.
Qabsaawotni Oromoo kanneen saba isaaniif qabsaawaa turanii fi ammallee qabsaawaa jiranis qananii addaa bu’aa qabsoon argamuu malu irraa argachuuf hamilanii miti. Qabsoo irratti wareegamuu fi wareegamuu dhabuun ammoo hireedha malee namni ooydii ibiddi diinaa irraa mallisu seene cuftuu warra lubbuu isaanii ummata isaaniif wargeega kennaniidha. Galatni namoota akkasii haalaan ol aanaadha. Maaf wareegamuu dhabaniif warra wareegaman qofa faarsanii isaan akka carraa wareegama irraa baraaraman tuffachuu, balaleffachuu fi xiqqeessuun hin barbaachisu. Namootni qabsaawota qaqqaalii akkasii salphisan yoo jiraatan isaantu salphattoota hiriyyaa hin qabneedha.
Yeroo ammaa haala QBO ABOn durfamtu irra geette jirtuirraa kan ka’e amala dhabeeyyota hedduudhatu bifa gara garaan gadi yaa’anii of mul’isuuf carraaqutti jiru. Kan nama raaju ammoo isaan cuftuu qabsoo kanatti abbaa ta’uuf qabsaawota durii maqaa balleessuutti gadi taa’uudha. Akkasuma qabsaawota kalee qabsoo isaan irra turan busheessuuf gara dirreetti bahanii afanfaajawiinsa diiggaa ummata keessatti uumuuf wixxifachaa jiran. Keessumaa maqaa Oromoo guutuu golgatanii kanneen amantiin, gosummaa fi naannummaan socho’uuf wixxifatanis ni jiru. Warreen akkasii mallattoon isaan ittiin beekkaman qabsaawota dur qabsoo irra turan qabsoo kana irraa ni moggeessan ykn akka isaanitti dabalamu hin fedhan.
Harki caalaan miseensa murna kanaa namoota dhaaba ABOn faallaa dhaabbachaa turan faallaa dhaabbachaa jiranii fi fuula durattis faallaa dhaabbachuun itti fufuuf akeeka qabaniidha. Oromummaa irra gosummaa, naannummaa fi amantii maxxanfatu. Irra gubbaa Oromummaa uffatanii irra keessa ammo amaloota tokkummaaOromoo sharafan kanaan kanneen cuuphamaniidha. Dhalli Oromoo yeroo ammaa kan inni barbaadu Oromummaa fi Oromiyaadha malee amaloota dhiphummaa alagaan isaan balaaleffattu kanaa miti. Yeroo kana keessatti firii qabsoon ABOn tirfamtee as geette tana saamuuf ykn ukkaamsuuf jecha qofa hidhatnoo diigomsaa namootni, gartuuleen hidhatanii jiran akka jiran ummatni Oromoo hubatee beekee of irraa ykn irraa of eeguu qaba.
Summii diigomsa hiriyyaa hin qabne ummata keenya keessatti dhalchiisiifu murtnootni haala adda addaan bobba’anis dhuguma dhala Oromoo dhiiga saba kanaa kan qaban yoo ta’e gocha hammeenyaa kana irraa of qusachuu barbaachisa. Qabsaawaa kale kabajuun qabsaawaa har’aa tuffachuu ykn jibbuu hin barbaachisu. Qabsaawaan sabaa qabsaawaa sabaa hin balfu. Kan wareegamee fi kan hafes ija tokkoon ilaala. Kan wareegaman faarsanii kan hin wareegaman hafan arrabsuun sirrii miti. Gootni sabaa jiraatee fi jiraachuu baates yeroo hundumaa jajamaadha. Kan dabre jajuun kan jiru daran jajjabeessuu akka ta’e beekkamuu qaba. Kan jiru arrabsuun kan dabre qofa jajuun hamilee isa jiruu keessatti ajjeesuudha. Kun aadaa qabsoo irraa of duuba nama deebisuu waan ta’eef irraa of eeguun barbaachisaadha.
Namootni sabaaf qabsaawuu irra maqaaf qabsaawuudhaaf hidhatanii ABO diiguu irratti bobba’an cufti ija sabaa keessa seenanii akka jiran beekuu qabu. Keessumaa namootni sabaan farfamuu barbaadcha qofaaf haala gara garaan socho’an kufaatiin isaanii dhihaatee jira. Dhalli Oromoo sabaaf qabsaawo ABOn caasaa hoogganamu WBO, Qeerroo Bilsummaa Oromoo fi ummata Oromoo walii galaa keessatti ammatamee jira. Qabsaawotni afaan qofaa hojiin bira hin jirre, dhumaatii ummata keenyaa odeessuu malee karaa ummatni keenya dhumaatii jalaa bahee akka boohetti diina isaa itti boochisuu danda’u irratti waa hin jetne fudhatamni isaan qabaachuu malan kan yeroo qofaaf akka ta’e beekkamuu qaba.
Gurraa fi garaa matayyaaf qabsaawuu dhiisanii sabaa fi Oromiyaaf qabsaawuuf karaa qajeelaa fi haqaa daandii ABO jalatti deebi’uun barbaachisaadha. Ana malee si malee, ebaluun malee qabsoon bakka hin geettu jechuudhaan of dhaaduun wal dhaaduun fi kaan balaaleffachuu fi balfuun ummata Oromoof furmaata hin taatu. Sabaaf lolanii lolchiisuun diina kuffisanii kufuun seenaa gootummaa faarfamaa galmee qabsaawota dhugaa keessatti galmeeffachuudha. Bittinsitootni qabsoo fi qabsaawotaa farreen qabsoo keenyaa waan ta’aniif ijji Oromoo cufti dammaqiinsa si’oomina qabuun of irraa eeguu barbaachisa.
Qabsoon itti fufti! Bilisummaan ni dhufti!
Wal Shakkaa fi Wal Sodaachaa Waliin Hojjechuun Hin Danda’amu
Wal Shakkaa fi Wal Sodaachaa Waliin Hojjechuun Hin Danda’amu Berhanu Hundeetin, Onkoloolessa 10, 2018 Namni…
Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa (Ijioo Dubbii ABO…
Waadaan Araaraa fi Nageenyaa Gama ABOtiin Hin Jigu !
Waadaan Araaraa fi Nageenyaa Gama ABOtiin Hin Jigu ! (Ibsa ABO – Mudde 13, 2018)…
Dhumaatiin Calanqoo Lammaffaa isa Dhumaa Tahuu Qaba!
Hatattamaan Waan Godhamuu Qabuu